Uru nke bootstrapping maka eCommerce | ECommerce ozi ọma
O nwere ike ị gaghị ama ihe echiche nke ọgbọ a na-apụta, mana ọ nwere ike ịba uru dị ukwuu maka mmepe ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa gị n'ịntanetị. N'ihi na na nsụgharị bootstrapping bụ okwu asụsụ sitere na Bekee ma na-ezo aka na ịmalite ihe na-enweghị ihe onwunwe ma ọ bụ jiri obere akụ. Na ụkpụrụ, ọ nweghị mmekọrịta gabigara ókè na ụdị azụmaahịa a, mana ọ bụrụ na anyị abanye n'okwu a, ị ga-ahụ na ọ karịrị ihe ị nwere ike iche na mbụ.
N'ihi na bootstrapping bụ nke mbụ kachasị ụzọ dị mkpa iji bịaruo ụdị azụmaahịa ebe etinyere gị. Maka n'ezie, maka ndị na-anụ okwu ahụ debootstrapping maka oge mbụ, nke a bụ nkọwa dị nkenke. Zụlite azụmahịa na-enweghị ego mpụga. Ihe o mejuputara bu itinyeghachi uru niile ugboro ugboro iji mee ka ntụgharị a bawanye.
Site na usoro a nke otutu maka ndị ọrụ, ọ bụghị obere eziokwu na okwu a na - enyere gị aka ịgbatị oge ịkwụ ụgwọ na ndị na-ebubata ya. N'ihi na mgbe ọ bụla ị na-arụ ọrụ na nnukwu ụdị, ọ ga-enye gị usoro ịkwụ ụgwọ nke 60 ruo ụbọchị 90. Ọ bụ ụzọ ọzọ ị ga-esi kwado onwe gị ma ọ bụrụhaala na ị nwere ike ree ngwaahịa a tupu akwụkwọ ọnụahịa abịa.
1 Bootstrapping: kedụ onyinye gị kachasị mkpa?
2 Enweghị mmetụta dị na mpụga
3 Dị ka ahịa ahịa
4 Ihe megide itinye ya n'ọrụ
Bootstrapping: kedụ onyinye gị kachasị mkpa?
Mgbe ị matara ihe niile okwu ọhụụ a na-egosi ma na-anọchi anya ya, ihe ọ ga - enye aka na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa gị anaghị abanye. Dị ka ihe atụ site na ndị na-esonụ ndapụta na anyị na-aga banyere n'okpuru:
Ihe dị mfe bụ otu n'ime njirimara ya kachasị mkpa, ọ bụ ezie na na mbụ ọ nwere ike iyi ihe ọzọ. N'echiche a, ekwesiri icheta na ka emechara ọ bụ ngwa ọrụ dị mfe iji, gbanwee maka mmemme ọ bụla na nke ahụ na-enye gị ohere ịmepụta nnukwu weebụsaịtị na obere oge. Na mgbakwunye, Bootstrap dị nghọta, yabụ ọ na-eme ka ọrụ anyị nwee nnukwu nchekwa dị oke mkpa n'oge ị ga-arara ọrụ ndị a.
Adaba na netwọkụ mmekọrịta
Otu ihe dị iche iche nke Bootstrap sistemụ dị ugbu a bụ na e mepụtara ya na ụlọ ọrụ Twitter na mbụ maka iji ya rụọ ọrụ, ma mechaa kesara ya. Hapụ ụfọdụ n'ime njirimara ndị a na-ejikarị na netwọk mmekọrịta a dị ike gburugburu ụwa. Mgbe n'aka nke ọzọ, ọ na - enye aka ịbawanye uru na azụmaahịa gị ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị. Site na visibiliti ọ nwere ike iweta usoro azụmahịa gị site ugbu a gawa.
Nyere azụmahịa nke dijitalụ
Obi abụọ adịghị ya na ụdị nkuzi a na-enye gị ohere itolite site na nkwụsị, na-etinye omume na ihe ọmụma obere obere, na-eme ka ọ dị mma maka ndị chọrọ itinye ihe ọmụma banyere ọrụ ha na azụmaahịa. Dị ka otu n'ime akụkụ ya kachasị mkpa site ugbu a gaa n'ihu.
Site na ebe na n'ezie ọ dịghị mkpa ịkọ akụkọ ndị na-etinye ego na izute oge ha, n'ihi na ọ bụ naanị ndị ọchụnta ego na-edozi ha. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, ọ bụ a usoro na n'elu ihe niile na-akụzi banyere nzukọ na ibu ọrụ, nkà kpọrọ ihe nke ukwuu na ahịa ọrụ. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, ị dị njikere zuru oke iji nwayọ nwayọ rụọ ọrụ ọkachamara gị ebe ọ bụ na ngwụcha ụbọchị ihe metụtara ikpe ndị a akọwapụtara.
Nta nsogbu na pọtụfoliyo
Omume a na-aga nke ọma taa, n'ihi na nsogbu akụ na ụba bụ isi ihe mgbochi bido azumahia. Maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị kpebiri ịmalite, ịdị adị nke ndị mmekọ, ndị itinye ego ma ọ bụ enyemaka maka azụmaahịa bụ enweghị isi. Nke a bụ otu akụkụ nke aghaghi iburu n'uche mgbe ị na-emepe usoro ndị ọzọ na mmalite nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmaahịa site ugbu a.
Mgbe n'aka nke ọzọ, ikwesighi ichefu na agbanyeghị na ọ bụrụ na n'ikpeazụ ị nwere echiche n'uche, egbula ohere maka enweghị ego, ọ bụghị nhọrọ ịzụ ahịa niile chọrọ ya. Okwesiri ibu ihe mmuta nke i gha etinye n’oriri na nnabata okwu a n’ibili na mpaghara dijital. Na n'elu ndị ọzọ ndị ọzọ ot ma ọ bụ omenala si niile si ele ihe anya na ị pụrụ ịtụle n'oge ọ bụla na ọnọdụ.
Enweghị mmetụta dị na mpụga
N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ọtụtụ uru ị nwere ike ịchọta site n'echiche a ma nwee ike inye gị ụfọdụ ma ọ bụ echiche ọzọ iji tinye ya n'ọrụ iji bulie usoro azụmahịa gị site n'oge a. N'ime usoro izugbe a, o doro anya na ị nwere ike ibubata ụfọdụ njirimara kachasị mkpa nke echiche a nke anyị na-ekwu maka ya n'isiokwu a. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnọdụ ndị a, anyị ga-ekpughere gị n'okpuru:
Onye nwe ya ma ọ bụ ndị nwe ya nwere njikwa zuru oke na ụlọ ọrụ ahụ, na-enweghị mmetụta mpụga site na ndị na-etinye ego dịka ọmụmaatụ ma nke ahụ ga - enyere gị aka ijikwa njikwa nke azụmaahịa a na - ekwu maka ya.
Ọzọkwa, echefula na na njedebe ị nwere ego, enweghị mgbazinye ego, na na ọ na-ebelata mkpa ọ dị imefu ego na ịkwụghachi ego mgbazinye.
Ijikwa ego nke ọma site na mbido na -emepụta ezigbo mmefu mmefu. N'echiche a, enwela obi abụọ na ọ bụ sistemụ ga - enyere gị aka ijikwa usoro azụmaahịa dijitalụ gị ma ọ bụ nke ntanetị dị mma karịa site na mbido okike ya.
Dị ka mgbakwunye, ọ ga-enyekwara gị aka ịghara ida na arịa ụlọ ọrụ dị oke ọnụ na akụrụngwa. Zụta ihe eji eme ihe ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ nwere uche, ịgbazite ego iji chekwaa. Nke a bụ nkuzi ị ga - amụta site na oge ndị a nke usoro a pụrụ iche maka ndị ọchụnta ego na mpaghara dijitalụ, n'agbanyeghị ụdị ya na akụkụ ebe ọ dị ma ọ bụ nọrọ.
Dị ka ahịa ahịa
Akụkụ ọzọ kachasị mkpa ị kwesịrị ịtụle n'oge a sitere na eziokwu ahụ bụ na a na-ejikarị bootstrapping eme ihe maka usoro ịzụ ahịa, ebe okike nwere ike ịga nke ọma na nnukwu ego. Fọdụ usoro dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala gụnyere na usoro ahịa ọpụrụiche a maka anyị niile. Iji maa atụ, n'okwu ndị a anyị ga - egosi site n'oge a.
Hazie ihe omume pụrụ iche na ụlọ ahịa gị, weta ndị na-ese ihe ma ọ bụ ndị ama ama ma ọ bụ ndị isi nri - ọ dabere na ngwaahịa gị - iji nye ndị na-azụ ahịa na ndị na-azụrịrị ihe kpatara ha ga-eji zụta. Dịka otu n’ime ihe ndị ama ama na mbido ya.
Wụpụta ndepụta email nke ndị ahịa na atụmanya ị nwere ike ịkpọtụrụ. Nke a bụ mgbanwe ị nwere ike iji mgbe ị na-etinye usoro ahịa dijitalụ a na nke ahụ nwere ike inyere gị aka ịkwado ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị. Na ihe dị mma, site n'ụdị ọ bụla nke usoro ị nwere ike iji n'oge ọ bụla.
Nakwa eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ụdị kachasị dị mma iji soro ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ ma ọ bụ ndị agbata obi na-akwalite ndepụta nke njirimara ndị a, ọ bụrụ na nke a bụ ọchịchọ gị ozugbo site ugbu a. Ikekwe nke a bụ otu akụkụ kachasị ama maka ọtụtụ ndị ọrụ yana ebe ị nwere ike itinye aka gị.
N'oge ndị a, ị ga-eji nlekọta pụrụ iche tụgharịa akụkụ ikpebi maka mmejuputa ya. Ọ bụghị onye ọzọ karịa ihe ndị a ka anyị ga-ekwupụta: ọ bụrụ na ị na-ewu azụmaahịa na-enweghị ịrịọ ma ọ bụ ịnakwere ego n'aka ndị na-etinye ego, ị na-arụ ọrụ.
Ihe megide itinye ya n'ọrụ
Ọ bụ ezie na ọ dị iche, ọ nwere ọtụtụ nsonaazụ ndị ị na-achọghị na ị kwesịkwara iburu n'uche iji nyochaa ihe ịga nke ọma ma ọ bụ nke ngwa ya na ọrụ ọkachamara gị. Ha bụ akụkụ nke ọkụ na onyinyo nke ahụ gụnyere itinye ya n'ọrụ ugbu a. N'ihi na n'eziokwu, ha abụghị uru niile n'oge a na-eme ya, dịka n'aka nke ọzọ ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche site n'ụzọ a pụrụ iche. N'ihi na ị gaghị echefu n'aka nke ọzọ na enwere ọtụtụ ọghọm mgbe ị na-ajụ injections nke mpụga:
Ọganihu azụmaahịa nwere ike ịbelata ma ọ bụ gbochie ya ma ọ bụrụ na ọchịchọ karịrị ikike ụlọ ọrụ nwere ngwaahịa ma ọ bụ ihe ọ ga-ere.
Onye ọchụnta ego ahụ na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ego ọ bụla site na ịghara ịkekọrịta ibu ahụ na ndị na-etinye ego na mpụga, bụ ndị tinyere ego iji kwado uto nke ụlọ ọrụ.
Ha bụ ihe ị ga-atụ anya iji zere ọnọdụ ndị ị na-achọghị na mmepe nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmahịa site ugbu a gaa n'ihu. Nke mere na o nweghi ụdị ihe ịtụnanya dị iche iche site n'oge a gawa. Ma nke ahụ bụ, ka emesịrị, otu n'ime ebumnuche gị kachasị dị n'ụdị ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Uru nke bootstrapping maka eCommerce
Nchekwa ụtụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị